By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Wednesday, 01 Jan 2020 01:51 PM / 0 Comment / 83 views
Maxkamada Darajada 1aad ee Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari Puntland ayaa waxaa Maanta oo Arbaco ah la soo taagay Odayaal iyo Siyaasiyin Xukuumadda Puntland ku dhaliiley howlaha uu Imaaraadka ka wado deegaannada Maamulkaas.
Odayaasha & Siyaasiyiinta oo wax ka badan Bil u xiran Maamulka Puntland ayaa lagu eedeeyey qodobo ay kamid yihiin inay ku xadgudbeen sharciga iyo kala dambaynta Puntland ayna gacmaha kula jireen abaabul iyo kicin dadweyne.
Maxkamaddu waxay dhageystay garmaqalka Xeer Ilaalinta,waxaana Maxkamadda ay mudeysay in Maalinta Axada ah ee soo socota dib la isugu soo laabto Maxkamadeynta Afarta ruux oo isugu jira Siyaasiyiin Iyo Odayaal si loo ambaqaado.
Dadka Maanta Maxkamada Magaalada Boosaaso la soo taagey ayaa waxaa kamid ah Siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo hadda ka hor Maxkamad la horgeeyey,isla markaana ay siideysay,kaddib markii la sheegay in cafis loo fidiyey.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xilligii uu ahaa musharaxa Madaxweynaha waxaa uu sheegay in uu kasoo horjeedo in dadka fikirkooda lagu xiro,hayeeshee dad badan ay ku eedeeyeen in uu isaga dad badan u xir xirey fikiriisa oo Xabsiyada Puntland ay ku jiraan.